Chii chinonzi Arduino? | Mahara emahara
Isu tese takanzwa nezve Arduino Project uye nemhedzisiro yayo kune iyo Hardware yenyika, asi chokwadi ndechekuti vashoma vanoziva chaizvo Arduino uye zvatingaite nebhodhi rakadai kana izvo chaizvo izvo Arduino Project inosanganisira.
Mazuva ano zviri nyore kwazvo kuwana bhodhi arduino, asi isu tichafanirwa kuziva uye kuva nechimwe chinhu chinopfuura chakareruka Hardware bhodhi iyo tambo shoma uye mamwe ma LED mabhuru anogona kubatanidzwa.
2 Zita rako rakauya sei?
3 Izvo zvakasiyana sei neRaspberry Pi?
4 Ndeapi mamodheru emaplate aripo
5 Chii chatinoda kuti chishande?
6 Mamwe mapurojekiti atinogona kuita neArduino bhodhi
Iyo Arduino projekiti ndeye Hardware yekufambisa iyo inotsvaga kusikwa kwePBB kana Printed Circuit board iyo inobatsira chero mushandisi kugadzira nekuvandudza ekupedzisira uye anoshanda emagetsi mapurojekiti. Saka ndiro Arduino hachisi chinhu chinopfuura bhodhi rePBB isu tinokwanisa kudzokorora kakawanda sezvatinoda pasina kubhadhara rezinesi kana kuvimba nekambani kuti ishandise uye / kana kugadzira.
Iyi kufamba (Arduino Project) inotsvaga kuumbwa kweFree Hardware, ndiko kuti, chero mushandisi anogona kuvaka yavo yemabhodhi nekuvaita iwo anoshanda zvakakwana, zvirinani sekushanda semabhodhi atinogona kutenga.
Iyo chirongwa chakazvarwa muna 2003 apo vadzidzi vakati wandei kubva kuIVREA Institute vaitsvaga imwe nzira yemabhodhi ane BASIC Stamp microcontroller. Mahwendefa aya anodhura anodarika $ 100 pachikamu, mutengo wakakwira kune chero mudzidzi. Muna 2003 zviitiko zvekutanga zvinoratidzika zvine yemahara uye yeruzhinji dhizaini asi iyo mutungamiriri isingagutse wekupedzisira mushandisi. Ichave muna 2005 panosvika Atmega168 microcontroller, microcontroller isingangopi simba bhodhi chete asi zvakare inoita kuti kuvaka kwayo kutengeke, kusvika nhasi avo vane mhando dzeArduino board dzinogona kuita $ 5.
Zita rako rakauya sei?
Iyo Project inowana zita rayo kubva kune tavern padhuze neIVREA Institute. Sezvatakambotaura, chirongwa ichi chakazvarwa mukupisa kwechikoro ichi chiri muItari uye padyo nesangano iri, kune tavern yevadzidzi inonzi Bar di Re Arduino kana Bar del Rey Arduino. Mukukudza nzvimbo ino, ivo vakatanga chirongwa, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino naDavid Mellis, vakasarudza kudaidza mabhodhi uye chirongwa ichi Arduino.
Kubva 2005 kusvika nhasi, iyo Arduino Project haina kunge isina gakava pamusoro pevatungamiriri uye kodzero dzepfuma. Nekudaro, pane mazita akasiyana akadai saGenuino, yaive chiratidzo chepamutemo chePurojekiti mahwendefa akatengeswa kunze kweUnited States neItari.
Izvo zvakasiyana sei neRaspberry Pi?
Vazhinji vashandisi vanovhiringidza iyo Raspberry Pi bhodhi nemabhodhi eArduino. Sezvo kune anonyanya kufarira uye asina hukama nechinhu, mahwendefa ese ari maviri angaite senge akafanana, asi hapana chiri kumberi kuchokwadi. Arduino ibhodhi rePCBB rine microcontroller, asi Iyo haina processor, haina GPU, haina gondohwe ndangariro uye hapana inoburitsa madoko senge microhdmi, wifi kana bluetooth izvo zvinoita kuti tikwanise kushandura iyo bhodhi kuti ive minicomputer; asi Arduino ibhodhi rinogadziriswa mupfungwa yekuti tinogona kurodha chirongwa uye Hardware inoshandiswa ichaita chirongwa ichocho: chero chinhu chakareruka sekubatidza / kudzima girobhu mwenje ye LED kana chimwe chinhu chine simba sechikamu chemagetsi chedhinda ye3D.
Ndeapi mamodheru emaplate aripo
Iwo Arduino Project mabhodhi akakamurwa kuita maviri mapoka, chikamu chekutanga chingave chiri bhodhi rakareruka, microcontroller PCB board y chikamu chechipiri chingave nhovo kana mahwendefa ekuwedzera, mabhodhi anowedzera mashandiro kuArduino bhodhi uye anoenderana nayo nekushanda kwayo.
Pakati peanonyanya kufarirwa Arduino bhodhi mamodheru ndeaya:
Uye pakati pezvakakurumbira kana zvinobatsira Arduino nhoo modhi ndeiyi:
Mahwendefa ese uye nhovo ndiwo ekutanga mamodheru. Kubva pano tichawana makiti uye zvishandiso izvo zvichave nechinangwa chekugadzira Arduino kukudziridza rakanyanya basa senge iyo CloneWars chirongwa chinogadzira makiti ekushandura iyo Arduino MEGA bhodhi kuita ine simba 3D printer.
Chii chatinoda kuti chishande?
Kunyangwe zvingaite senge zvisina musoro kana kusanzwisisika, kuti bhodhi reArduino rishande nemazvo, isu tinoda zvinhu zviviri: simba uye software.
Chekutanga pane zvese zviri pachena, kana tichizoshandisa chinhu chemagetsi, tichada simba rinogona kutorwa kubva kunesimba remagetsi kana zvakananga kubva kune chimwe chigadzirwa chemagetsi nekutenda kwaro usb.
Tichawana software nekutenda kuArduino IDE iyo inotibatsira kugadzira, kuumbiridza uye kuyedza zvirongwa nemabasa atinoda kuti bhodhi yedu yeArduino ive nawo. Arduino IDE yemahara software iyo yatinogona kupfuura nayo dandemutande iri. Kunyangwe isu tichigona kushandisa chero imwe mhando yeIDE uye software, chokwadi ndechekuti zvinokurudzirwa kushandisa Arduino IDE kubvira Iyo ine yakanyanya kuenderana pamwe ese epamhando mamodheru eiyo Arduino Project uye ichatibatsira isu kutumira ese kodhi data pasina dambudziko..
Mamwe mapurojekiti atinogona kuita neArduino bhodhi
Heano mamwe emapurojekiti atinogona kuita neyakareruka ndiro yeiyi purojekiti (zvisinei nemhando yatinosarudza) uye inowanikwa kune wese munhu.
Iyo gadget inonyanya kuzivikanwa yeavo vese uye iyo yakapa chirongwa cheArduino mukurumbira hauna mubvunzo 3d purinda, kunyanya iyo Prusa i3 modhi. Iyi gadget yechimurenga yakavakirwa pane yekuwedzera uye iyo Arduino MEGA 2560 bhodhi.
Mushure mekubudirira kweprojekti iyi, mapurojekiti maviri akafanana akaberekwa izvo zvakavakirwa paArduino uye zvine chekuita nekudhinda kwe3D. Yekutanga yavo yaizove chinhu che 3D scanner kushandisa ndiro Arduino UNO uye yechipiri chirongwa chinoshandisa Arduino bhodhi kuitira kuti ishandise zvakare uye igadzire filament nyowani ye 3D maprinta.
Nyika yeIoT ndeimwe yemachira kana nzvimbo uko Arduino ine huwandu hukuru hwemapurojekiti. Arduino Yún ndiyo yakasarudzika modhi yemapurojekiti aya anoita emagetsi kukiya, zvigunwe zvigunwe sensors, nharaunda maseru, nezvimwe ... Muchidimbu, bhiriji pakati peInternet nemagetsi.
Ichi chidimbu chidiki cheArduino Project uye mabhodhi eArduino. Pfupiso diki iyo inotipa pfungwa yeaya mahwendefa, asi sekutaura kwatakaita, mavambo avo anotangira muna 2003 uye kubvira ipapo, mahwendefa Arduino anga achikura kwete chete mukuita kana simba asiwo muzvirongwa, nyaya, makakatanwa uye chokwadi chisingaperi chinoita kuti Arduino sarudzo huru yemahara Mahara Hardware mapurojekiti kana kungoita chero chirongwa chine chekuita neMagetsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Chii chinonzi Arduino?
Gadzira yako wega Arcade muchina neRaspberry Pi
Ndeupi mutauro mutauro wekudzidzisa vana vangu